KwiZenzo zabapostile – 2fish
ekhaya / Bible / KwiZenzo zabapostile
KwiZenzo zabapostile kuvela kwizahluko ukuba amakhasi eli phepha. Baye nice “imigca” ezifana /bible/acts/ch-1. (Sicela uye kwi olwahlula izahluko njengoko 11-28 avele Ch 11.) kunjalo, le ncwadi yonke ithiwe thaca apha ngasezantsi, kakhulu.
KwiZenzo zabapostile 1
1:1 ngokuqinisekileyo, Tiyofilo, Imbali yokuqala ngayo yonke into awaqala ngazo uYesu ukuzenza kwanokuzifundisa,
1:2 efundisa Apostles, awayebanyule ngoMoya oyiNgcwele,, kwada kwezisa umhla, wafukulwa.
1:3 Kwakhona wazinikela ephila kubo, emveni kokuva kwakhe, ezibonakalalisa ngokwakhe kubo lonke kwiintsuku ezimashumi mane, ethetha izinto ezingabo ubukumkani bukaThixo kunye elucidations ezininzi.
1:4 Zoku- nabo, wabayalela ukuba ufanele angemki eYerusalem, kodwa ukuba ulinde ukuba Isithembiso uYise, "Malunga owazivayo," uthe, 'Emlonyeni wam.
1:5 Ngokuba uYohane, kanjalo, wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niya kubhaptizwa ngoMoya oyiNgcwele,, kungekabi kade emva kwezi ntsuku. "
1:6 ngoko ke, abo babehlanganisene ndawonye wambuza, bathi, "Nkosi, ngaba eli lixesha xa uya kubuyisela ubukumkani bakwaSirayeli?"
1:7 Wathi ke yena kubo: "Asikokwenu ukwazi amaxesha okanye amathuba, andinikileyo uBawo awamise ngelakhe igunya lakhe.
1:8 Kodwa niya kwamkela amandla kaMoya oyiNgcwele, odlula phezu kwakho, yaye niya kuba ngamangqina mna eYerusalem, nakulo lonke elakwaYuda naseSamariya, kwaye luse eziphelweni zomhlaba. "
1:9 Waza akuba ezitshilo ezi zinto, ngoxa bahlala bemlalele, waphakanyiswa, kunye ilifu yamsusa emehlweni abo.
1:10 Ke kaloku, bakubon 'ukuba ke bemlalele abenyuka naye beya ezulwini, khangela, wema kufuphi kuwo amadoda amabini ezimhlophe.
1:11 Bathi: "Madoda, maGalili, yini na ukuba ume apha ejonge phezulu ezulwini? lo Yesu, ngubani unyusiweyo kuni, wasiwa ezulwini, uya kubuya e kanye enye ngendlela nimbonile esiya phezulu ezulwini. "
1:12 Baza babuyela eJerusalem, bevela entabeni, ekuthiwa yeyemiNquma, osondeleyo eYerusalem, ngaphakathi uhambo lwesabatha.
1:13 Ke bakuba bangena cenacle, Enyuka kuloo ndawo apho uPetros noYohane, NoYakobi noAndreya, UFilipu noTomas, NoBhartolomeyu noMateyu, UYakobi ka-Alifeyu, noSimon iTsha-, nekaJuda kaYakobi, bebehlala.
1:14 Zonke ezi zaye ukuzingisa ngamxhelo mnye emthandazweni, ndawonye nabafazi, kunye noMariya, unina kaYesu, kunye nabantakwabo.
1:15 Ngaloo mihla, Peter, esukuma phakathi kwabazalwana, wathi (Ngoku ke isihlwele amadoda zizonke yaba malunga namashumi amabini):
1:16 "Abazalwana Noble, isibhalo zimelwe kukuzaliseka, athe uMoya oyiNgcwele kwangaphambili ngomlomo kaDavide malunga noYudas, ngubani yinkokeli yabo abophe uYesu.
1:17 Wayesele Yena phakathi kwethu, yaye kwaba liqashiso lakhe ukuba le nkonzo.
1:18 Kwaye le ndoda ngokuqinisekileyo wayenayo estate evela umvuzo bobutshinga, kwaye, ukuba zixhonyiwe, ke uqhuma evulekileyo embindini kunye nawo onke amaziko bakhe zangaphakathi wathulula.
1:19 Ke oko kwazeka kuwo onke nabemi baseYerusalem, ukuze le ntsimi yabizwa ngolwimi lwabo, yiAkeldama, yiyo i, 'Umhlaba wegazi.'
1:20 Kuba kubhaliwe kwathiwa encwadini yeeNdumiso: 'Makhe indawo yabo yokuhlala kuba senkangala kwaye akukho namnye ohlala phakathi kwalo,'Yaye', Mabuthatyathwe ngomnye episcopate yakhe. '
1:21 ngoko ke, ke kubalulekile ukuba, kuwo la madoda abaye ukuhlanganisana kunye nathi lonke ixesha lonke okokuba iNkosi uYesu ebingena iphuma phakathi kwethu,
1:22 iqalele elubhaptizweni lukaYohane, kwada kwayimini xa eyanyuswa ngayo kuthi, enye yezi yenziwe lingqina lokuvuka kwayo. "
1:23 Yaye bamisela ezimbini: Joseph, owayebizwa ngokuba nguBharsabhas, obizwa nangokuba nguYusto, kwakunye noMatiya.
1:24 yaye ethandaza, bathe: "Wena, O Nkosi, oyaziyo intliziyo wonke, kudandalaziswe ukuba zeziphi kwaba babini oyena umnyulileyo,,
1:25 ukuthatha indawo solu lungiselelo nobupostile, awaphambukayo kubo uYuda prevaricated, ukuze aye kweyakhe indawo. "
1:26 Bawisa amaqashiso ngabo, iqashiso laphuma phezu Matthias. Waza wabalelwa ekubeni ngumthunywa kunye nabanye abalishumi elinanye.
KwiZenzo zabapostile 2
2:1 Xeshikweni ke zazizalisekile iintsuku wepentekoste zaye zagqitywa, babekunye bonke kwindawo enye.
2:2 Kwaza ngequbuliso, Kwafika ilizwi eliphuma ezulwini, njengolo umoya sisondela ngogonyamelo, sayizalisa yonke indlu ababehleli kuyo.
2:3 Kwabonakala kubo iilwimi ezahlukeneyo, ezingathi zezomlilo, apho lahlala phezu ngamnye kubo.
2:4 Bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele,. Yaye baqalisa ukuthetha ngeelwimi ezahlukeneyo, kanye njengoko uMoya oyiNgcwele pha obuciko kubo.
2:5 Ke kaloku kwakukho kuyo amaYuda eYerusalem, amadoda awoyika uThixo, bevela kuzo zonke ephantsi kwezulu.
2:6 Uthe kwakubakho esi sandi, yabuthelana inkitha kwaye bedidekile engqondweni, ngenxa yokuba ngamnye wayephulaphule bona bethetha ngezakomawabo iintetho.
2:7 Ke bonke bakhwankqiswa, baza bafuna ukwazi ukuba, bathi: "Khangela, asingabo bonke aba bathethayo asingamaGalili na?
2:8 Yaye kwenzeka njani ukuba sivile nganye kuzo ngolwimi lwethu, apho azalwa?
2:9 Parthians namaMedi and namaElam, kunye nabo abahlala eMesopotamiya, ElakwaYuda, eKapadokiya, Ebhala and Asia,
2:10 LaseFrigi kwelasePamfili, Egypt kunye iindawo Libya ezo ngeenxa waseKirene, kanye kufika entsha amaRoma,
2:11 ngokufanayo amaYuda beguqula, AmaKrete nama-Arabhu: sivile nathi bethetha ngeelwimi zethu imisebenzi yamandla kaThixo. "
2:12 Bathi nqa ke bonke bakhwankqiswa, baza bafuna ukwazi ukuba, bathi omnye komnye: "Kodwa yintoni lo nto?"
2:13 Kodwa wathi zimbiza abanye, "Aba bantu zizele yiwayini entsha."
2:14 kodwa uPetros, ukuma kunye elinanye, waphakamisa izwi lakhe, waza wathetha kubo: "Madoda, maYuda,, nabo bonke abo bahlala eYerusalem, makwazeke oku kuni, neendlebe zenu ukutyekela amazwi am.
2:15 Kuba la madoda benxilile, njengoko nina niba kunjalo, kuba kuselilixa lesithathu lemini.
2:16 Oku khona koko kuthethiweyo umprofeti uYoweli:
2:17 'Kwaye oku kuya kuba: ngemihla yokugqibela, itsho iNkosi, Ndiya kuthulula, uMoya wam, phezu kwayo yonke inyama. Oonyana benu neentombi zenu. Kunye nolutsha bakho baya kubona imibono, kunye namadoda akho aphuphe amaphupha.
2:18 kwaye ngokuqinisekileyo, phezu kwabantu bam nabafazi nezicaka ngaloo mihla, Ndiya kumthulula uMoya wam, baprofete.
2:19 Kwaye ndiya kuzihlanganisela izimanga ezulwini phezulu, kunye nemiqondiso emhlabeni phantsi: igazi nomlilo kunyuka umsi.
2:20 Ilanga liya kujika libe bubumnyama, inyanga ibe ligazi, Phambi kokuba ize imini enkulu kunye zibonakale yeNkosi ifika.
2:21 Kwaye oku kuya kuba: abasukuba ukulibiza igama leNkosi uya kusindiswa. '
2:22 Madoda, maSirayeli, waveni la mazwi: UYesu waseNazarete yindoda iqinisekisiwe nguThixo phakathi kwenu ngenxa yamandla, nangezimanga, nangemiqondiso waphumeza uThixo ngayo phakathi kwenu, kanye njengokuba nawe usazi.
2:23 lo mntu, phantsi isicwangciso esichazayo likaThixo nangokwazi kwakhe kwenxa, yanikelwa ezandleni liyabhubha, ohluphekayo, aze abulawe.
2:24 Yena lowo uThixo wamvusa ezaphule Zakundibhijela izintya zelabafileyo, ngokuba, inene, kwakungenakwenzeka ukuba ukubanjwa kwalo.
2:25 Kuba uDavide uthi ngaye: 'Ndasoloko ndiyibona iNkosi phambi kwamehlo am, ngokuba yena esandleni sam sokunene, ukuze ndingashukunyiswa.
2:26 Ngenxa yale nto, intliziyo yam yaba nemihlali, kunye nolwimi lwam yezikhumbuzo. Ngaphezu, nenyama yam iya kuphumla inethemba.
2:27 Ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam Esihogweni, kananjalo ndiya kumnikela oyiNgcwele wakho ukuba abone ukubola.
2:28 Usazisile kum iindlela zobomi. Uya kundizalisa ngokupheleleyo ulonwabo yi ebusweni bakho. '
2:29 abazalwana Noble, ndivumele ndikhe ndithethe ngokukhululekileyo kuni ngokuphandle ngomawokhulu uDavide,: kuba ndadlula apho waza wangcwatywa, nengcwaba lakhe likho phakathi kwethu, kwada kwayile mini.
2:30 ngoko ke, wayengumprofeti, kuba wayesazi ukuba uThixo wamfungela isifungo kuye malunga esiqhameni sesinqe sakhe, malunga Lowo wayeza kuhlala etroneni yakhe.
2:31 kusengaphambili le, wayethetha ngovuko lukaKristu. Kuba akukho wasala ngasemva Esihogweni, engazange nenyama yakhe ingabonanga kubola.
2:32 lo Yesu, UThixo wamvusa aphinde, yaye le thina sonke singamangqina aba.
2:33 ngoko ke, waphakanyiselwa ngasekunene kukaThixo, waza wamkela kuYise idinga loMoya oyiNgcwele, wathulula lo phandle, njengokuba ngoku niyibonayo niyivayo.
2:34 Kuba uDavide akazange anyukele ezulwini. Kodwa yena wathi: 'Yathi iNkosi eNkosini yam INkosi: Hlala ngasekunene kwam,
2:35 Ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo seenyawo zakho. '
2:36 ngoko ke, ukuze yonke indlu kaSirayeli kakhulu ngokuqinisekileyo ukuba uThixo wenze lo Yesu ofanayo, nambethelelayo emnqamlezweni nina, wamenza iNkosi noKristu. "
2:37 Ke kaloku, bakubon 'ukuba bayaziva ezi zinto, baba nonomoya entliziyweni, yaye bathi kuPetros nabanye abapostile: "Yintoni esimele siyenze, abazalwana zobunene?"
2:38 kodwa ngokwenene, UPetros wathi kubo: "Yenza yokuvuma; baze babhaptizwe, ngamnye wenu, egameni likaYesu Krestu, ukuze kuxolelwe izono zenu. Kwaye niya kwamkela isipho soMoya oyiNgcwele.
2:39 Kuba idinga likuni, ngokuba, oonyana bakho, nabo bonke abo bakude: kuba nabani na iNkosi uThixo wethu iya endibabizele. "
2:40 Ke ngoku, namanye amagama amaninzi kakhulu, awamngqinelayo waza wabanxusa, bathi, "Zisindiseni kwesi sizukulwana lonakeleyo."
2:41 ngoko ke, abo bamkela intetho lakhe ngovuyo, babhaptizwa. Nemiphefumlo malunga namawaka amathathu kongezelelwa ngaloo mini.
2:42 Ngoku ke yokuzingisa imfundiso Apostles, kwaye asibubudlelane ekuqhekezeni isonka, kwaye imithandazo.
2:43 Bafikelwa yasungulwa wonke umphefumlo. kwakhona, imiqondiso ezininzi kwanemiqondiso kufezwa yi abapostile eYerusalem. Kwaye kukho ke ngoloyiko olukhulu ngo wonke.
2:44 Kwaye ngoko Bonke ke ababekholwa babendawonye, kwaye baba zonke izinto abafana.
2:45 Baye bethengisa nangemihlaba nangempahla yabo nempahla, kwaye lidala ukuba bonke, kanye njengokuba nayiphi na kuzo eswele.
2:46 kwakhona, baqhubeka, ngemihla, ukuba abe bemxhelo mnye etempileni, ukuba baqhekeze isonka phakathi kwezindlu; kwaye bathabatha izidlo zabo kukugcoba, benolungelelwano lwentliziyo,
2:47 bemdumisa uThixo kakhulu, kwaye ubambe benonelelwe ngabantu bonke. Kanye yonke imihla, iNkosi anda abo basindiswayo phakathi kwabo.
KwiZenzo zabapostile 3
3:1 Ke kaloku, uPetros, noYohane babenyuka besiya etempileni ngexesha nelixa lesithoba lomthandazo.
3:2 Ke kaloku indoda ethile, , ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo, ke ziphethwe. Baza kuyekelela kuye imihla ngemihla emnyango wetempile, leyo kuthiwa Mhle, ukuze ukucela amalizo kwabo wangena etempileni.
3:3 Kwaye le ndoda, akuba yakubona uPetros noYohane ekuqaleni ukungena etempileni, yacela, ukuze ukuba bayilize.
3:4 Ke uPetros noYohane, beqwalasele kuye, wathi, "Khangela apha kuthi."
3:5 Waza wasingasinga ndakuqwalasela kuyo, ngethemba lokuba uza kwamkela into kubo.
3:6 Wathi ke uPetros: "Isilivere negolide asiyam. Kodwa endinako, Ndiya kulinika wena. Egameni likaYesu Kristu umNazarete, vuka uhambe. "
3:7 Wathabatha ngesandla sokunene, ke wayivusa. Ke kaloku imilenze yakhe iinyawo saqiniswa ngoko nangoko.
3:8 Umtsi, Yema, wahamba-hamba. Waza wangena kunye nawo, wangena etempileni, ihamba ixhumaxhuma, idumisa uThixo.
3:9 Baza bonke abantu bayibona ihambahamba, idumisa uThixo.
3:10 Baza bamqonda, ukuba lowo efanayo eyayihleli ubehlalela amalizo eMnyango oMhle wetempile. Baza bazaliswa luloyiko nqa yiloo nto ihlileyo kuyo.
3:11 ke, njengoko yathi nca kuPetros noYohane, bonke abantu babalekela kubo evarandeni, leyo ekuthiwa yekaSolomon, ngokumangala.
3:12 kodwa uPetros, bekubona, waphendula wathi kubo abantu: "Madoda akwaSirayeli, yini na ukuba nimangaliswe yile nto? Hi wena, yini na ukuba nisijonge, ngokungathi ngamandla ethu okanye ngamandla ukuba wayinceda yatshintsha le ndoda ukuba ahambe?
3:13 UThixo ka-Abraham, inguThixo kaIsake, inguThixo kaYakobi, uThixo woobawo bethu, ekuhombisile uNyana wakhe uYesu, lowo, kanjalo, banikelwe namkhanyela ebusweni bukaPilato, xa wayenika umgwebo ukumkhulula.
3:14 Ke nina namkhanyela oyiNgcwele, Just One, kwaye abalicelileyo indoda engumbulali ukuba inikwe kuwe.
3:15 Ngempela, yaba Umbhali of Life lowo abulawe, athe uThixo wamvusa kwabafileyo, lowo Saye singamangqina.
3:16 Kwaye ngokholo egameni lakhe, le ndoda, lawo niwabonileyo aziwa, iqinisekise igama lakhe. Kwaye ukholo olungaye lunike lo mntu zempilo kupheleleyo phambi kwenu nonke.
3:17 Kwaye ngoku, bazalwane, Ndiyazi ukuba uyenze le nto ngokulahleka, kanye njengokuba iinkokeli benu.
3:18 Kodwa ngale ndlela uThixo uzizalisekisile izinto awazazisa kwangaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofeti: ukuba uKristu wakhe wayeya kubandezeleka.
3:19 ngoko ke, baguquke baze iguqulwe, ukuze izono zenu alucimi.
3:20 Ke ngoku, xa ixesha wovuselelo kuya kufika bevela ebusweni beNkosi, uya kuthumela lowo kwangaphambili kuwe, UYESU khristu,
3:21 lowo izulu, umele athabathe, kude kube lixesha lokubuyiselwa kwezinto zonke, uThixo ethethe ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele, evela edlule.
3:22 Kanjalo, wathi uMoses: 'Kuba uYehova uThixo wenu iya kunivelisela umprofeti kubazalwana benu, onjengam; okufanayo uze uphulaphule ngokwento yonke into aze athethe nawe.
3:23 Kwaye oku kuya kuba: wonke umphefumlo othe akawaphulaphula loo mProfeti uya akutshabalalise ebantwini. '
3:24 Ke bonke abaprofeti ababethetha, ukususela kuSamuweli emva koko, ukuba ezi ntsuku.
3:25 Nina ningoonyana babo abaprofeti, umnqophiso, UThixo undimisele ukuba oobawo bethu, esithi kuAbraham: 'Yaye inzala yakho zonke iintsapho zomhlaba ziya kusikelelwa.'
3:26 UThixo wamvusa uNyana wakhe waza wamthuma kuni kuqala, ukuba anisikelele, ukuze ngamnye lubuye ngokwakhe kubungendawo bakhe. "
KwiZenzo zabapostile 5
5:1 Ke kaloku indoda ethile, uHananiya ngegama, nomkayo Naye uSafira, wathengisa ngentsimi,
5:2 waye nenkohliso malunga Ixabiso lentsimi, ngemvume nomfazi wakhe. Kwaye bezisa nje inxalenye yawo, wamisa ezinyaweni zabapostile.
5:3 Wathi ke uPetros: "Ananiya, kungani na ukuba uSathana ehendwa intliziyo yakho, ukuze ube uya umxokise uMoya oyiNgcwele, ube nenkohliso malunga ixabiso lomhlaba?
5:4 Ngaba elawo ngoxa igcinwe ngayo? Ke kaloku, wathengisa ngayo, Yabingengabo okusemandleni akho? Kutheni na le nto entliziyweni yakho? Akuxoke kubantu, kodwa uThixo!"
5:5 Uphendule ke uHananiya, phezu kokuva la mazwi, wawa phantsi wafa. Yaye lawo ngoloyiko olukhulu awongamela bonke abo bevayo oko.
5:6 Ke abafana asuka waza wamhlalisa; yaye bephethe phandle, bamngcwaba.
5:7 Ke malunga ngowamaxa amathathu wadlula, zangena nomkakhe, engayazi loo nto ihlileyo.
5:8 Wathi ke uPetros kuye, "Ndixelele, umfazi, ukuba uthe wathengisa ngentsimi le mali?"Wathi yena, "Ewe, ukuba loo mali. "
5:9 Wathi ke uPetros kuye: "Yini na ukuba nivumelane ukuvavanya uMoya weNkosi? Khangela, iinyawo zabo bangcwabe indoda yakho sezisemnyango, kwaye baya niwathathile!"
5:10 Ngoko nangoko, wawa phantsi phambi kweenyawo zakhe wafa. Emva koko abafana wangena, bamfumana efile. Kwaye bamthwalela phandle, bamngcwabela ecaleni umyeni wakhe.
5:11 Yaye Kwabakho ukoyika kulo lonke ibandla nabo bonke abazivayo ezi zinto.
5:12 Kwaye ngezandla zabapostile imiqondiso nezimanga ezininzi zokuba phakathi kwabantu. Bonke badibana ngamxhelo mnye e nesezindlu kaSolomon.
5:13 Kwaye phakathi kwabanye, akukho namnye waba nabuganga bakusinamathelisa kubo. Kodwa ke abantu bebenze.
5:14 Ke kaloku inkitha yamadoda nabafazi sakholwayo eNkosini ake yokwanda,
5:15 ngokokude babesithi, bababeke abagulayo ezitalatweni, ukuwabeka kwiimandlalo kunye stretchers, lo nto, njengokuba uPetros wafikayo, ubuncinane isithunzi sakhe sibe nokuwela phezu namnye kubo, yaye kunqumka izifo.
5:16 Kodwa isihlwele kwakhona wakhawuleza ukuya eYerusalem bevela kwizixeko ezikufutshane, ithwele imilwelwe nabakhathazwa ngoomoya abangcolileyo, ababesithi bona baphiliswe bonke.
5:17 Emva koko ke umbingeleli omkhulu nabo bonke abo babekunye naye, yiyo i, ihlelo heretical bakubaSadusi, wavuka bazaliswa likhwele.
5:18 Baza babeka izandla phezu Abapostile, baza basibeka entolongweni eqhelekileyo.
5:19 Kodwa ebusuku, isithunywa seNkosi sazivula iingcango zentolongo waza wabakhokelela ngaphandle, bathi,
5:20 "Hambani niye kuma etempileni, nithetha ebantwini onke la mazwi zobomi. "
5:21 Bathe ke bakukuva oku, bangena etempileni ukukhanya kuqala, kwaye befundisa. Waza umbingeleli omkhulu, kunye nabo babekunye naye, wasondela, yaye wayibizela ndawonye intlanganiso yamatyala nawo onke amadoda amakhulu oonyana bakaSirayeli. Baye bathumela endlwini yamakhonkxwa ukuba beziswe phambi kwabo.
5:22 Kodwa xa abalindi babefike, yaye, phezu lokuvula intolongo, Ngeningalifumananga kuzo, babuya ingxelo kubo,
5:23 bathi: "Indlu yamakhonkxwa siyifumene okunene ngokuqinisekileyo itshixiwe ngayo yonke inkuthalo, nabalindi bemi ngaphandle phambi komnyango. Ke phezu ukuyivula, asifumananga mntu ngaphakathi. "
5:24 ke, xa umantyi wetempile nababingeleli abaziintloko xa beva la mazwi, ukuba baqiniseke ngazo, njengoko oko kumele kwenzeke.
5:25 Kodwa umntu kwafika ingxelo kubo, "Khangela, la madoda zibekwe entolongweni, nangaya etempileni, emi efundisa abantu. "
5:26 Ke umantyi, nabalindi, waya wabazisa amandla. Kuba babesoyika abantu, hleze baxulutywe ngamatye.
5:27 Bathe ke akuba ebakhuphele, ukuba ndimi apha entlanganisweni yamatyala kwabo. Yaye umbingeleli omkhulu wababuza,
5:28 wathi: "Ukuze ngamandla wena ukuba bafundise kweli gama. Ngokuba, yabonani, niyizalisile iYerusalem ngemfundiso yenu, yaye nithanda ukuzisa igazi lalo mntu phezu kwethu. "
5:29 Ke kaloku uPetros nabathunywa waphendula wathi: "Kuyimfuneko ukuba ukuthobela uThixo, ngaphezulu kakhulu kunokuba abantu.
5:30 UThixo woobawo bethu wamvusa uYesu, lowo abulawe nguye oxhonywe emthini.
5:31 Nguye lowo uThixo wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene njengoMlawuli noMsindisi, khon 'ukuze anikele zenguquko noxolelo lwezono kuSirayeli.
5:32 Saye singamangqina akhe ezo zinto, nguMoya oyiNgcwele, lowo uThixo awunike bonke abo abathobelayo kuye. "
5:33 Bathe ke bona bakuva ezi zinto, ukuba alimele kakhulu, yaye behlela ukubabulala.
5:34 Kodwa othile entlanganisweni yamatyala, umFarisi ogama linguGamaliyeli, umfundisi womthetho, obekekileyo kubantu bonke abantu, wavuka waza wayalela amadoda ukuba phandle ngokufutshane.
5:35 Wathi ke yena kubo: "Madoda akwaSirayeli, kufuneka silumke xa usenza konke ngala madoda.
5:36 Ngokuba phambi kwaloo mihla, Kwasuka Wasondela, ngelithi yena ukuba abe umntu, yaye inani lamadoda, malunga namashumi amane, anamathele kuye. Kodwa wabulawa, nabo bonke abo bakholwayo kuye bachithachitheka, yaye kuxhomekeka.
5:37 Emva lo, UYuda welaseGalili Wasondela, ngemihla kumanani obhaliso, waza wajika abantu ngayo yena. Kodwa yena wabhubha, kunye bonke bephela, abaninzi njengoko anamathele kuye, ngabavela.
5:38 Ngoku ke, Ndithi kuwe, Khwelelani kwaba bantu nibayeke. Kuba, ukuba eli cebo okanye msebenzi, ukuba lingaba lelabantu, uya kwaphulwa.
5:39 kodwa ngokwenene, ukuba yinto evela kuThixo, uya kukwazi makayiqhawule, yaye mhlawumbi kufunyanwa ukuba baye balwa nxamnye noThixo. "Yaye bavumelana naye.
5:40 Kwaye ucele kule Abapostile, akuba babatyabula, bona nxamnye nabo ukuba bathethe kwaphela egameni likaYesu. Kwaye ke kuthathwe ukuba.
5:41 yaye eneneni, baphuma ebusweni bentlanganiso yamatyala, bevuya, ngokuba kuthiwe bafanele ubunzima ukuthuka egameni egameni likaYesu.
5:42 Kanye yonke imihla, etempileni naphakathi kwezindlu, abazange kupheza ukuba abafundise ivangeli kuKristu Yesu.
KwiZenzo zabapostile 6
6:1 Ngaloo mihla, njengoko inani labafundi landa, kwabakho ukukrokra kwawesiGrike amaYuda ngakwawesiHebhere, ngenxa yokuba abahlolokazi bawo waphathwa ngokusa ulungiselelo ngemihla.
6:2 Kwaye ke abalishumi elinababini, ebiza ndawonye inkitha yabafundi, wathi: "Akukho nto ukuba ashiye ngasemva iLizwi likaThixo ukuba bakhonze theyibhile.
6:3 ngoko ke, bazalwane, ukukhangela phakathi kwenu amadoda asixhenxe lobungqina elungileyo, ezele nguMoya oyiNgcwele nangobulumko, esiya kuwamisela lo msebenzi.
6:4 kodwa ngokwenene, siya kuba njalo ekuthandazeni nasekulungiseleleni ilizwi. "
6:5 Kwaye isicwangciso emehlweni inkitha iphela. Kwaye banyula uStefano, indoda ezele lukholo nanguMoya oyiNgcwele, kunye uFilipu noNikanore kunye noTimon kunye Timon kunye Parmenas and Nicolas, a ukufika entsha evela kwa-Antiyokwe.
6:6 Aba ke wabeka phambi emehlweni Apostles, yaye ngoxa wayethandaza, ke wabeka izandla phezu kwabo.
6:7 Kwaye iLizwi leNkosi unyuka, kunye nenani labafundi eYerusalem banda kakhulu. Yaye iqela elikhulu lababingeleli lilululamela ukholo.
6:8 ke uStefano, ezele lubabalo namandla, wenza imiqondiso emikhulu nemimangaliso phakathi kwabantu.
6:9 Kodwa abathile, bendlu yesikhungu ekuthiwa-Libertines, kunye nabase, kunye Alexander, kunye nabo kubo babevela eKilikiya and Asia wesuka yaye ephikisana kunye noStephen.
6:10 Kodwa abazange bakwazi ukumelana nabo ubulumko noMoya, awayethetha.
6:11 Khona bathenga amadoda ukuba bathi bakuweva amazwi wayethetha ekumnyeliseni uMoses kuThixo.
6:12 Wenjenjalo ke Uxhokonxa abantu kunye namadoda amakhulu, nababhali. Kwaye ayebaleka ndawonye, Bambambile ke bamsa kwibhunga.
6:13 Babeka amangqina abuxoki, owathi: "Lo mntu aliyeki ukuthetha amazwi nxamnye indawo engcwele nomthetho.
6:14 Kuba simve esithi, UYesu waseNazarete lo uya kuyichitha le ndawo, awenze wambi amasiko, lona uMoses awawanikela kuthi. "
6:15 Bonke abo babehleli entlanganisweni yamatyala, beqwalasele kuye, babona ubuso bakhe, ungade ucinge ukuba busuke baba ubuso Yingelosi.
KwiZenzo zabapostile 7
7:1 Wathi ke umbingeleli omkhulu, "Ngaba ezi zinto ukuze?"
7:2 Wathi uStefano: "Abazalwana Noble noobawo, lalela. UThixo wozuko wabonakala kubawo wethu uAbraham, xa ekwelaseMesopotami, ngaphambi kokuba wahlala kwelakwaHaran.
7:3 Wathi uThixo kuye, 'Suka ezweni lakowenu nakwizalamane zakho, uye ezweni endiya kukubonisa lona. '
7:4 Emva koko wemka ezweni lamaKaledi, yaye wayehlala kwaHaran. yaye kamva, emva kokuba uyise wakhe ufile, UThixo wamsa wamfudusela kulo mhlaba, apho nihlala.
7:5 Waza ke wamnika lifa kuwo, azazi isithuba inqwanqwa elinye. Kodwa wambeka ngedinga lokuba uya kumnika ube ngowakhe, nembewu yakhe emva kwakhe, nakuba engazange abe nonyana.
7:6 Emva koko uThixo wamxelela ukuba inzala yakhe yayiya kuba nakumfiki ophakathi kwilizwe lasemzini, kwaye ukuba ukubenza balahle ukholo lwabo, kwaye ubaphatha kakubi, iminyaka engamakhulu amane.
7:7 'Yaye uhlanga eya kulukhonza, Ndiya kunigweba,'Yathi iNkosi. 'Emva kwezi zinto, Baya kumka kwaye uya indikhonze kule ndawo. '
7:8 Waza ke wamnika umnqophiso wolwaluko. Kwaye ngoko ke wamitha uIsake, wamalusa ngomhla wesibhozo. NoIsake wamitha uYakobi, Jacob, Oosolusapho elinambini.
7:9 Kwaye Oosolusapho, unomona, bathengisa uYosefu eYiputa. Kodwa uThixo waba naye,.
7:10 Kwaye ke wamweza kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Waza ke wamnika ubabalo nobulumko emehlweni kaFaro, ukumkani waseYiputa. Kwaye wammisa ukuba abe yirhuluneli phezu kweYiputa phezu kwendlu yakhe yonke.
7:11 Kwabakho indlala kwenzeka kulo lonke elaseJiputa nelaseKanana, kunye imbandezelo enkulu. Kwaye oobawo bethu bengafumani kudla.
7:13 Ngomhla sihlandlo sesibini, UYosefu wabona ngabantakwabo, kunye nomnombo bakhe wabonakaliswa kuFaro.
7:14 Emva koko uYosefu wathumela waza wamngenisa uYakobi uyise, abakowethu yakhe yonke, beyimiphefumlo emashumi asixhenxe anantlanu.
7:15 UYakobi wehla waya eYiputa, yaye yadlula kude, ngokunjalo benza ngako ooyise bethu.
7:16 Kwawela basiwa kwaShekem, yaye babekwa engcwabeni awawuthengayo uAbraham ngexabiso lemali koonyana bakaHamore, unyana ka uShekem.
7:17 Kwathi wawurhola ixesha ledinga, ukuba uThixo wazityhila uAbraham kufuphi, bakhula abantu, banda eYiputa,
7:18 nokuba kwada kwavela kumkani wumbi, owayengamazi uYosefu, wavuka eYiputa.
7:19 Le, ohlanganisa nangemizalwana yethu, kakubi oobawo bethu, ukuze bona bazilahle iintsana zabo, ukuze agcinwe ephila.
7:20 Ngexesha esifanayo, kwazalwa uMoses. Waye sinobabalo lukaThixo, yaye yena wondliwa iinyanga zantathu endlwini kayise.
7:21 ke, ukuba ishiywe, intombi kaFaro kuye, yaye wamvusa abe ngunyana wayo.
7:22 Waqeqeshwa ke uMoses kubo bonke ubulumko bamaYiputa. Waye ke eyinkunkqele ngamazwi nangemisebenzi yakhe.
7:23 Kodwa xa iminyaka emashumi mane ubudala zaye zagqitywa kuye, ke bavuka entliziyweni yakhe, lokuba aye kuvelela abazalwana bakhe, oonyana bakaSirayeli.
7:24 Ke kaloku, akuwubona ethile kukwenzakala ehlupheka, akubona othile esoniwa. Kwaye eziwela umYiputa, wenza njengempindezelo kuye lowo enyamezela ukwenzakala.
7:25 Ke yena boqonda abazalwana bakhe ukuba uThixo andiphe usindiso ngesandla sakhe. Kodwa bona babengaliqondi kuyo.
7:26 ngokwenene, ngoko, ngosuku olulandelayo, wabonakala phambi kwabo babephikisana, yaye wabanyanzela ukuba baxolisane, bathi, 'Abantu, niyazalana. Ngoko kutheni na ukulimaza omunye?'
7:27 Ke yena lowo ebangela yokwenzakala kummelwane wakhe, wayisusa, bathi: 'Ngubani na Ndikumisele inkokeli nomgwebi phezu kwethu?
7:28 Ngaba kunokwenzeka ukuba ufuna ukundibulala, ngendlela efanayo ngendlela ufuna ukundibulala njengalaa mJiputa?'
7:29 ke, ngeli gama, uMoses wabaleka. Waza waba ngumphambukeli kwilizwe lakwaMidiyan, apho bazale oonyana ababini.
7:30 Kuthe ke iminyaka engamashumi amane, Kwabonakala kuye, kwintlango yentaba yeSinayi, yingelosi, elangatyeni lomlilo etyholweni.
7:31 Kwaye phezu ebona le, UMoses, wamangaliswa ngumbono lowo. Kuthe ke, akusondela ukuze sibone oko, ilizwi leNkosi lafika kuye, bathi:
7:32 'Mna ndinguThixo wookhokho bakho: uThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. "UMosis, eyenziwayo ukuze wangcangcazela, akabi saba nako ukujonga.
7:33 Kodwa wathi kuye iNkosi: 'Khulula iimbadada ezinyaweni zakho. Kuba loo ndawo umi kuyo ingumhlaba ongcwele.
7:34 ngokuqinisekileyo, Ndikubonile ndakubona ukuphathwa kakubi kwabantu bam abaseYiputa, ndakuva nokuncwina kwabo. Kwaye, Ndiya kuza phantsi ukuya kubakhulula. Kwaye ngoku, ukuya phambili kwaye ndiza kuthumela kuwe eYiputa. '
7:35 lo Moses, lowo bazala ngokuthi, 'Ngubani na Ndikumisele njengenkokeli nomgwebi?'Nguye uThixo wathumela ukuba abe yinkokeli nomhlanguli, ngesandla sesithunywa esabonakalayo kuye etyholweni.
7:36 Yena wabakhokelela ngaphandle, ekufezeni imiqondiso nezimanga ezweni laseYiputa, nakuLwandle oluBomvu, kwaye enkangala, iminyaka engamashumi amane.
7:37 Lo Moses, wathi koonyana bakaSirayeli: 'UThixo uya kunivelisela umprofeti kubazalwana benu. Uze nimve yena. '
7:38 Lo nguye lowo owayephakathi kwalo ibandla entlango, kunye ingelosi eyayithetha kuye entabeni yaseSinayi, noobawo bethu. Nguye lowo wamkela amazwi zobomi, ukuze azinikele kuthi.
7:39 Nguye lowo oobawo babezimisele ukuthobela. kunokuba, bamgatya, kwaye iintliziyo zabo wemka waya eYiputa,
7:40 besithi kuAron: 'Senzele oothixo thina, ingene phambi kwethu. Kuba lo Moses, thina Kulohambisa kude ezweni laseYiputa, thina asazi ukuba kwenzeke ntoni kuye. '
7:41 Kwaye ngoko baphaka ithole ngaloo mihla, basondeza amadini kwisithixo, baye ke bevuyisana ngemisebenzi yezandla zabo.
7:42 Wajika ke uThixo, waza wamnikela esandleni, ukuba luthobela imikhosi yezulu, kanye njengoko kubhaliweyo encwadini yabaprofeti: 'Ngaba nawe ningayisondezi amaxhoba nemibingelelo kum iminyaka emashumi mane entlango,, Owu ndlu kaSirayeli?
7:43 Kanti enazithabathayo ngokwenu umnquba kaMoleki, Nenkwenkwezi yothixo wenu uRemfan, Imifanekiso ke leyo nani ngokwenu abunjwe ukuze adore kubo. Kwaye ke ndiya kunifudusela, ngaphaya kweBhabheli. '
7:44 Umnquba wesingqino wawukoobawo bethu entlango, kanye njengokuba uThixo ngenxa engaphambili ngabo, ethetha kuMoses, ukuba uza kwenza oko ngokungqinelana nefom abewubonile.
7:45 Kodwa oobawo bethu, lukhu, wayisa nayo, noYoshuwa, ezweni kweentlanga, lowo uThixo wabagxotha ebusweni boobawo bethu, kwada kwayimihla kaDavide,
7:46 owafumana ubabalo phambi koThixo yaye wacela ukuba ukuze afumane umnquba uThixo kaYakobi.
7:47 Kodwa ke uSolomon wamakhela indlu.
7:48 Kodwa Oyena Uphakamileyo akahlali zindlwini ezakhiwe ngezandla, kanye njengoko watshoyo ngomprofeti:
7:49 'Izulu liyitrone yam, ihlabathi sisihlalo seenyawo zam. Yindlu enjani ubuya kundakhela yona? itsho iNkosi. Ke yona indawo yokuphumla kwam?
7:50 Ezi zinto azenziwanga ndim zonke ezi zinto?'
7:51 Bantamo zilukhuni, bangalukileyo ngentliziyo, nangendlebe, wakha nibambene noMoya oyiNgcwele. Kanye njengokuba ooyihlo, ngokunjalo wenze ntoni.
7:52 Kubo abaprofeti nguwuphi na ongatshutshiswanga ngooyihlo? Kwaye Bababulala ababexela ngenxa engaphambili kokufika koliLungisa. Kwaye ngoku naba ngabanikeli nababulali ngaye.
7:53 Nina nawamkelayo umthetho zizenzo Angels, ukanti ningazigcinanga kuyo. "
7:54 ke, akuva ezi zinto, ukuba alimele ngokunzulu ezintliziyweni zabo, bamtshixizela amazinyo.
7:55 kodwa yena, ezele nguMoya oyiNgcwele,, kwaye ebekade ngenyameko ezulwini, wabona ubuqaqawuli bukaThixo, noYesu emi ngasekunene kukaThixo. Wathi yena, "Khangela, Ndiwabona amazulu evulekile, kwaye uNyana woMntu emi ngasekunene kukaThixo. "
7:56 ke, bedanduluka ngezwi elikhulu, ubavale iindlebe zabo, ngamxhelo mnye, indulumbane ngamandla kuye.
7:57 Ke yena ebiza, ngaphaya kwemida yesixeko, bamgibisela ngamatye. Kwaye amangqina wabeka iingubo zabo ecaleni ezinyaweni oselula, owayebizwa ngokuba nguSawule.
7:58 Kwaye njengoko Ayemgibisela ngamatye uStefano, ke wamemeza waza wathi, "Nkosi Yesu, wamkele umoya wam. "
7:59 ke, beziswe ngamadolo akhe, wadanduluka ngelizwi elikhulu, bathi, "Nkosi, musa ukubabeka tyala ngesi sono. "Akuba etshilo, walala eNkosini. Waye ke uSawule ekuthakazela ukubulala wakhe.
KwiZenzo zabapostile 8
8:1 Ke kaloku ngaloo mihla, kwabakho intshutshiso enkulu phezu kwalo ibandla eYerusalem. Baye bonke saa kuyo yonke imimandla elakwaYuda naseSamariya, ngaphandle Abapostile.
8:2 Kodwa uThixo-Ukoyika abantu amalungiselelo omngcwabo uStefano, kwaye benza isijwili esikhulu phezu kwakhe.
8:3 Emva koko uSawule uyayibhuqa eBandleni ungena kulo lonke zezindlu, kwaye tsala kude amadoda nabafazi, nokuba, ukuba entolongweni.
8:4 ngoko ke, abo ababesasazekile ojikelezayo, wokushumayela iLizwi likaThixo.
8:5 Ke kaloku uFilipu, zehlela emzini welaseSamariya, wayeshumayela uKristu kubo.
8:6 Kwaye isihlwele wayephulaphule ngenyameko yaye ngamxhelo mnye izinto ezibe kuthethwayo nguFilipu, kwaye bahlala bemlalele imiqondiso leyo akanakwenza.
8:7 Kuba baninzi kubo oomoya abangcolileyo, yaye, bedanduluka ngezwi elikhulu, la wesuka kubo.
8:8 Kwaye abaninzi nabanedumbe neziqhwala baphiliswa.
8:9 ngoko ke, Kwabakho ke uvuyo olukhulu kweso sixeko. Ke kaloku kwakukho ndoda ithile igama linguSimon, owake waba bili kweso sixeko, balala abantu baseSamariya, abathi yena ukuba abe umntu omkhulu.
8:10 Kwaye bonke abo babeza kuphulaphula, bethabathela komncinane besa komkhulu, wayethi: "Nantsi ke ngamandla kaThixo, ekuthiwa mkhulu. "
8:11 Baye ingqalelo kuye ngenxa, ixesha elide, yena Babezikhohlisa ngobunyangi bakhe.
8:12 kodwa ngokwenene, kanye ke bakholwayo nguFilipu, ngubani wokushumayela ubukumkani bukaThixo, amadoda nabafazi babhaptizwa egameni likaYesu Krestu.
8:13 Uthe ngoko uSimon ngokwakhe wakholwa kwaye, xa ubhaptiziwe, ukuba zilandelwe kuFilipu. Kwaye ngoku, ukubona kwakhona imiqondiso emikhulu nezimanga ukuba wenza, wathi makatha kwaye uvalo.
8:14 Ke kaloku, bakuva abapostile aba beseYerusalem, ukuba abaseSamariya balamkele ilizwi likaThixo, bathuma uPetros noYohane kubo.
8:15 Bathe ke bakuba befikile, bathandaza kubo, ukuze bamkele uMoya oyiNgcwele.
8:16 Kuba okwangoku anikangeni namnye phakathi kwabo,, kuba babhaptizwa egameni leNkosi uYesu.
8:17 Ngoko ke babeka izandla zabo phezu kwabo, bamamkela ke uMoya oyiNgcwele.
8:18 Ke kaloku uSimon wabona ukuba, yi nokubekwa izandla zabapostile, uMoya oyiNgcwele aphiwa, wezisa kubo imali,
8:19 bathi, "Nika lo mandla nam, ukuze ukuba lowo ndiya kunisa izandla zam, phezu kwakhe, amkele uMoya oyiNgcwele. "Kodwa uPetros wathi kuye:
8:20 "Makube imali wakho makabe nawe nasekutshabalaleni, kuba babesiba isipho kaThixo anayo imali.
8:21 Akukho yinxalenye okanye indawo ngani mayela nalo mcimbi. Kuba intliziyo yakho ayithe tye emehlweni kaThixo.
8:22 Kwaye, baphenduke kule, ububi bakho, sinxuse uNkulunkulu, ukuze mhlawumbi eli cebo lentliziyo yakho ukuba ixolelwe.
8:23 Kuba ndiyabona ukuba usenyongweni yobukrakra, nasentanjeni yentswela-bulungisa. "
8:24 Uthe ngoko uSimon baphendula bathi, "Ndikhungeleni nina eNkosini, ukuze nto oko ukuthethileyo kwenzeka kum. "
8:25 yaye eneneni, emva ebaqononondisa nabathetha iLizwi leNkosi, babuyela eYerusalem, yaye bashumayela kwimimandla eninzi yamaSamariya.
8:26 Ke kaloku isithunywa seNkosi kwathetha isithunywa seNkosi kuFilipu, bathi, "Suka usinge ezantsi, indlela elehla evela eYerusalem ukuya eGaza, apho kukho iyintlango. "
8:27 Esukile, wahamba. kwaye qaphelani, indoda Ethiopia, lithenwa, enamandla Etiyopiya, ukumkanikazi wamaTiyopiya, ebiphethe bonke ubutyebi bakhe, akufika uSawule eYerusalem ukuya kunqula.
8:28 Kwaye ngeli lixa ebuya, ke wayehleli phezu enqwelweni yakhe, ukufunda umprofeti uIsaya.
8:29 Uthe ke uMoya kuFilipu, "Sondelani ukhwele kule nqwelo."
8:30 ke kaloku uFilipu, ayebaleka, wayiva efunda incwadi yomprofeti uIsaya;, wathi yena, "Ngaba ucinga ukuba uyakuqonda oko ukufundayo?"
8:31 Wathi yena, "Kodwa njani mna, ngaphandle kokuba umntu uya wazityhilela yona kum?"Yaye ke wacela uFilipu ukuba ukwenyuka akhwele ahlale nayo.
8:32 Ke kaloku indawo iZibhalo ukuba ukufunda le: "Kanye imvu waza ekubulaweni. Yaye imvana cwaka phambi shearer kwakhe, ngoko ke wavula umlomo wakhe.
8:33 Wakrota isigwebo sakhe ngokuthobeka. Ngubani esizukulwaneni sakhe iya uchaze indlela ubomi bakhe lwasuswa emhlabeni?"
8:34 Emva koko ke ithenwa waphendula kuFilipu, bathi: "Ndiyakucenga, ikhonkxiwe nguye umprofeti uthi le? ngaye ngokwakhe, okanye omnye umntu?"
8:35 ke uFilipu, ovula umlomo wakhe, waqalela kweso sibhalo, ivangeli uYesu kuye.
8:36 Ke kaloku, bakubon 'ukuba siyaya endleleni, befikelela umthombo othile wamanzi. Wathi ithenwa: "Kukho amanzi. Yintoni eyayiza kuthintela na ukuba ndingabhaptizwa?"
8:37 Uthe ke uFilipu, "Ukuba ukholwa ngentliziyo yakho yonke, ukuba kuvumelekile. "Waza ke waphendula wathi, "Ndikholelwa ukuba uNyana kaThixo ukuba uYesu unguKristu."
8:38 Waza wayalela inqwelo ime. Kwaye bobabini uFilipu kwanethenwa wehla waya emanzini. Kwaye ke abhaptizwe nguye.
8:39 Bathe ke bakuba wenyuka emanzini, uMoya weNkosi wamthatha uFilipu, kwaye alaba sambona kwakhona. Emva koko wahamba indlela yakhe, benemihlali.
8:40 Ke kaloku UFilipu ke wafunyanwa e eseAshdode. Kwaye eqhubeka, yena ivangeli yonke imizi, wada wafika eKesareya.
KwiZenzo zabapostile 10
10:1 Ke kaloku kwakukho ndoda ithile eKesareya, ekwakuthiwa nguKorneli, -khulu, cohort ebizwa Italian,
10:2 indoda emhlonelayo, emoyikayo uThixo, kunye nayo yonke indlu yayo, enika amalizo abaninzi abantu, yaye ethandaza kuThixo.
10:3 Le ndoda Yabona embonweni kakuhle, malunga nelixa lesithoba lenini, kufika, isithunywa sikaThixo engena kuye, esithi kuye: "Korneli!"
10:4 kwaye yena, beqwalasele kuye, yabanjwa kukoyika, wathi yena, "Yintoni, inkosi?"Uthe ke yena kuye: "Imithandazo yakho kuphiwa kwakho kunyukile sisikhumbuzo emehlweni kaThixo.
10:5 Kwaye ngoku, ke thuma amadoda eJopa, aye kubiza umntu ogama linguSimon othile, ogama limbi linguPetros.
10:6 Le ndoda undwendwe kunye noSimon othile, wezikhumba, ondlu ecaleni kolwandle. Yena uya kukuxelela into omelwe kukuyenza. "
10:7 Ke kaloku isithunywa eso besithetha noKorneli, wabiza, ngaphandle abo phantsi kwakhe, zazibini kwizicaka zakhe zasendlwini, nesoldati abamhlonelayo uNdikhoyo.
10:8 Ke kaloku, ebacacisele zonke iindawo, wabathuma eYopa.
10:9 ke, ngosuku olulandelayo, ngoxa besenza uhambo, besondela kuwo umzi, UPetros wanyukela namagumbi aphezulu, ukuze sithandazele, malunga nelixa lesithandathu.
10:10 Yaye ekubeni walamba, wayefuna sinandipha ukutya. ke, njengoko sasilungiselela ngayo, bathabatheka ngokugqithiseleyo ingqondo wawa phezu kwakhe.
10:11 Wabona izulu livulekile, kunye container esithile, ngathi yilinen enkulu yelinen bandululwa phantsi, ezimbombeni zaso zone, evela ezulwini,
10:12 apho kwakukho zonke ezizitho zine, kwaye njengezinambuzane zomhlaba kwaye zezulu izinto eziphaphazelayo.
10:13 Yaye kwafika ilizwi kuye: "Vuka, Peter! Xhela udle. "
10:14 Wathi ke uPetros: "Makube lee kum, inkosi. Kuba mna andizange ndiyitye into engatyiwayo. "
10:15 Izwi, okwesibini kuye: "Oko uThixo nyulu, uze ungabizi eqhelekileyo. "
10:16 Ke kaloku oku kwenziwa kathathu. Kwaye ngoko nangoko isikhongozeli wenyuselwa ezulwini.
10:17 Ke kaloku, xa uPetros ndandimadolw ngaphakathi kuye ukuba ungaba uyintoni na umbono, awubonileyo, kungase, khangela, amadoda abethunyiwe evela kuKorneli, wema esangweni, wayebuza indlu kaSimon.
10:18 Bathe bakuba babizwa, bacela ukuba uSimon, ogama limbi linguPetros, waba lundwendwe kuloo ndawo.
10:19 ke, njengokuba uPetros ukucinga ngalo mbono, wathi uMoya kuye, "Khangela, amadoda amathathu ekufuna.
10:20 Kwaye, Vuka, behle, uhambe nawo, ungathandabuzi nento. Kuba athunywe ndim. "
10:21 ke uPetros, zehlela abantu, wathi: "Khangela, Mna lo eniyifunayo. Yintoni na isizathu apho ufikile?"
10:22 Bathi: "Korneli, yekhulu, umntu nje yaye boyika uThixo, ngubani ungqinelwe ngabo lonke uhlanga lwamaYuda, ufumene umyalezo ukusuka sisithunywa esingcwele ukuba ndokubiza uze endlwini yakhe, eve amazwi kuwe. "
10:23 ngoko ke, ebakhokela, wazamkela njengeendwendwe. ke, silandela ngosuku, nivuka, yaqonda nabo. Ke abathile nabazalwana abathile baseYopa bahamba naye.
10:24 Ke kaloku ngomhla olandelayo, Wangena eKhesariya. inene, UKorneli ebalindile, wayebizele ndawonye intsapho nabahlobo bakhe basondeleyo.
10:25 Kwathi ukuba, xa uPetros wangena, UKorneli waya kumkhawulela. Kwaye wawa phambi kweenyawo zakhe, yena abemoyika.
10:26 kodwa ngokwenene, Peter, nokuphakanyiswa kwakhe phezulu, wathi: "Vuka, Kuba nam ndingumntu. "
10:27 Nokuthetha naye, yena wangena, abafumane abaninzi ukuba ahlanganisene ndawonye.
10:28 Wathi ke yena kubo: "Uyazi ukuba ibe nezothe bekuya kuba indoda yamaYuda ukuze uhlanganiswe, okanye zongezwe, ngabantu basemzini. Kodwa uThixo, ukuyityhilelwa kwam, ukuba ndingabizi mntu ngokuthi uyinqambi, ungongcolileyo.
10:29 Ngenxa yale nangaphandle kwamathandabuzo, I xa wabiza. ngoko ke, ndiyakubuza, ukuba yintoni isizathu oye undibizele?"
10:30 Wathi UKorneli: "Ngoku Ngosuku lwesine, kuse kanye kweli lixa, ekubeni ke bendithandaza endlwini yam ngelixa lesithoba, khangela, indoda, yema phambi kwam vestment emhlophe, wathi yena:
10:31 'Korneli, umthandazo wakho uye weva kwaye kuphiwa wakho zikhunjulwe emehlweni kaThixo.
10:32 ngoko ke, thuma umntu eJopa, aye kubiza umntu ogama linguSimon, ogama limbi linguPetros. Le ndoda Ulundwendwe endlwini kaSimon, wezikhumba, kufuphi nolwandle. '
10:33 Kwaye, Ngoko nangoko wathumela kuwe. Kwaye wenze kakuhle ngokuza apha. ngoko ke, sonke ngoku langoku emehlweni akho ukuva zonke izinto babefundiswa, esaniyala ngazo ngeNkosi. "
10:34 ke, Peter, ovula umlomo wakhe, wathi: "Ndenze enyanisweni ukuba UThixo wabuso bamntu.
10:35 Kodwa ngaphakathi izizwe zonke, nabani na omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.
10:36 UThixo wathumela uLizwi oonyana bakaSirayeli, wabika zoxolo ngoYesu Kristu, ngokuba nguye iNkosi yabo bonke.
10:37 Niyazi ukuba iLizwi sele yenziwe kwaziwa kulo lonke elakwaYuda. Ngokuba ekuqaleni evela kwelaseGalili, emva kobhaptizo uYohane washumayela,
10:38 UYesu waseNazarete, lowo uThixo wamthambisa ngoMoya oyiNgcwele nangamandla, waya kulo lonke, esenza okulungileyo, ebaphilisa bonke ababephantsi kwamandla omtyholi. Kuba uThixo wayenaye.
10:39 Saye singamangqina azo zonke awazenzayo ilizwe lakwaYuda naseYerusalem, lowo bambulala nguye oxhonywe emthini.
10:40 UThixo wamvusa ngomhla wesithathu, wamvumela ukuba ibonakaliswe,
10:41 ukuba bonke abantu, kodwa ukuba amangqina preordained nguThixo, kwabo thina sadlayo saselayo naye emveni koko wabuya wavuka kwabafileyo.
10:42 Kwaye ke wasiyalela ukuba sishumayele ebantwini, siqononondise ukuba yena nguye owamiselwa ngu-Tixo abe ngu-ngumgwebi wabaphilayo lwabafileyo.
10:43 Kuye bonke abaprofeti anikele ubungqina ukuba, ngegama lakhe bonke abakholwayo kuye kufumana uxolelo lwezono. "
10:44 Nangona ukuba usawathetha uPetros la mazwi, wasuka wabawela uMoya oyiNgcwele phezu kwabo bonke abo babephulaphule iLizwi.
10:45 Kwaye athembekile kwabolwaluko, owayefike noPetros, Bakhwankqiswa ukuba ubabalo uMoya oyiNgcwele sathululwa naphezu kweentlanga.
10:46 Kuba aziva zithetha ngalwimi zimbi, zimenza mkhulu uThixo.
10:47 Wandula ke uPetros wasabela, "Njani ukuba nabani na ukuthintela amanzi, ukuze abo bamamkeleyo uMoya oyiNgcwele, akasayi ukubhaptizwa, kanye njengokuba nathi baye?"
10:48 Waza wayalela ukuba babhaptizwe egameni leNkosi yethu uYesu Kristu. naye ke bambongoza ukuba sihlale kunye nabo iintsuku ezithile.